China Magnet Valve Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Solenoid valve > Magnet Valve
Magnet Valve Vagadziri
Magnet Valve hunhu
DIP switch inosarudzwa pakati yakaenzana muzana kana mutsara.
Linear hunhu hwakagadziridzwa mudiki yekuvhura renji kuti ibvise matambudziko kubva kamwe kamwe kuwedzera kwekuyerera kana Magnet Valve yavhurwa.
Chinzvimbo kutonga uye chinzvimbo mhinduro mhinduro
Valve nzvimbo inoyerwa nguva nenguva kuitira kuti kukanganisa muhurongwa kugadziriswe nekukurumidza.
Yemukati yekumisikidza controller inovimbisa kuti iyo yekumisikidza chiratidzo uye vharuvhu sitiroko zvakanyatsoenzana uye inopa chinzvimbo chekupindura chiratidzo.
Yakanyanya kukurumidza kumisa kumhanya
Inovandudza kutonga-chiuno kupindura nguva uye kugadzikana
Kana Magnet Valve chivakwa kana nzvimbo ichida kukurumidza, kudzora kwakaringana uye zero vharafu pasi nguva, aya Modulating Magnetic Valves anoburitsa. Kururama hakuenzaniswi, kunyanya muzvikamu zvakaderera-kuyerera. Izvi zvinoreva kuchengetedza simba. Aya mavharuvhu anonyanya kunaka munzvimbo umo kuenderana kwemamiriro ekunze kwakakosha.
Inopa yakasimba yako nemidziyo, zviwanikwa uye rutsigiro rwaunoda kuti ubatsire iwe kwete chete kusangana, asi kupfuudza, ako vatengiâ € ™ tarisiro. Inogona kubatsira yako yakasimba kuburitsa hunyanzvi kugona, kudzikisira njodzi, mhinduro dzinodhura, sarudzo dzekushandisa uye ne - nguva yekuita kune vako vatengi.
Magnet Valve Iyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekugadzira nyanzvi HVAC system yakatarwa. Icho chishandiso chinopa mushandisi-inoshamwaridzika interface iyo inokutungamira iwe kune chaiyo kududzirwa uye inokutendera iwe kuti ugadzire yakasarudzika yakatarwa mameseji pasina emhando nhamba. Iko kusununguka kweichi chishandiso kunovimbisa kutarisisa kwako kuri pakuita kwekugona kukuru uye kunyaradza.
Mufananidzo uri pamusoro: Magnet Valve-yakagadzirwa quadrupole nemagineti ekugadzika pabhenji rechitoro, vakamirira kuongorora kwekupedzisira kweQA, isati yatumirwa kuFermilab. RadiaBeam inogadzira akasiyana magineti, diagnostics, uye zvimwe zvinhu zvekuwedzera maficha.
LINAC COMPONENTS YEMARABHO NEVANHU
Magnet Valve inopa akawanda ezvimisikidzo uye zvishandiso mhando dzinodiwa kune zvazvino ma particle accelerators: kuongororwa, magineti, uye maRF masisitimu, pamwe nezvose zvinodiwa zvemagetsi, zvemagetsi, uye zvemafuta manejimendi manejimendi. Kupupura kune mhando yezvinhu zvedu iko kushandiswa kwezvikamu zvedu nekutungamira mwenje sosi nzvimbo pasirese kusanganisira Magnet Valve kuTrieste. Yakasarudzika kuRadiaBeam ndiko kushingairira kwedu kubatana nenharaunda yekuwedzera. Nekutevera zvakanyanya kuenderera kuchichinja kwehunyanzvi zvinodiwa zvevatengi vedu, isu tinokwanisa kuenzanisa dhizaini yedu uye yekugadzira kugona kugadzirisa izvo zvakanyanya kudzvanya zvido zvezuva iri.
RadiaBeam inopa tambo iri kukura yezvivakwa zveRF zvimiro, zvinosanganisira mapikicha uye maLinacs. Kuwedzera kune edu akajairwa zvigadzirwa, isu tinopa tsika uye semi-tsika microwave zvimiro uye zvikamu kubva L-bhendi kune X-bhendi, uye kupfuura.
RadiaBeam inopa zvinehunyanzvi zvakagadziriswa mhinduro kune zvakajairika danda rekuongorora matambudziko. Mazana ezvedu nzvimbo dzekuongorora akaiswa uye ari kushanda mumarabhoritari kutenderera pasirese.
Magnet Valve Kubva kuma dipoles kuenda kune sextupoles kune undulators uye magnetic chicanes, isu tinogadzira yakazara tambo yemagineti uye magineti masisitimu ayo anogona kuve akagadziriswa kune yega yega application. Kudzora kwedu kweichi chiitiko chese kubva kumhepo coil ichimisikidza uye nekugadzira kwekunyepedzera kuQ / A uye dhizaini dhizaini inosimbisa kuita kwepamusoro.
TIUNZISE PAKUTANGA KUTI TIRERERE ZVINHU ZVINHU ZVINHU
Isu tinonzwisisa kuti vazhinji vevatengi vedu veMagnet Valve vanonzwa nemitengo yechigadzirwa. Accelerator zvikamu zvinowanzoita tsika uye zvishoma muhuwandu, saka semutemo mitengo inotungamirirwa zvakasimba neNon-Recurring Engineering. Kuchengetedza nguva nemari, vatengi vedu vanotibata nekukurumidza panguva yekutenga kutenderera kuti tivake pane zviripo kana zvakajairwa zvigadzirwa uye chengetedza nekubvisa zvisina kufanira mutengo weNRE. Saka, tifonere nekukurumidza kana zvaunoda zvazivikanwa! Usashandise zviwanikwa zvepurojekiti zvakakosha pane zveinjiniya usina kutanga waongorora mhinduro dziripo dzeRadia Beam dzinogona kurerutsa basa rako uye kuchengetedza mutengo.
Chigadzirwa cheAmerican Institute of Magnet Valve unogona kugadzira maratidziro nenzira yako. Na MasterSpec tenzi gwara maratidziro, bvisa izvo zvisingashande, wedzera zvaunofarira, uye zorora uine chokwadi chekuti ako maratidziro azvino uye akazara.
Aokai inyanzvi Magnet Valve vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.